Indlwana Yesimanje esanda kulungiswa; Ngena edolobheni! - I-Airbnb
Indlwana Yesimanje esanda kulungiswa; Ngena edolobheni!
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Alexa
U-Alexa Ungumbungazi ovelele
Okusha sha, okulungiswe kabusha, okuvunyelwe & okungokomthetho. Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela & indawo yokupaka ngaphambi kokungena. Uma ubufuna umtitilizo omuhle kakhulu e-Central Maui, unenhlanhla njengoba amanani anikezwa labo ababhukha manje ancintisana kakhulu ukukwamukela ukuthi uhambe kwenye yezindawo eziphephile kunazo zonke zokubalekela emhlabeni!
Sizibophezele ekuhlanzeni Sizibophezele
kumaphrothokholi okuhlanza athuthukisiwe asungulwe ngokubambisana nochwepheshe bezempilo nokungenisa izihambi. Nakhu esikwenzayo ukuhlanza nokusanithayiza:
Sisebenzisa izinto zokuhlanza nezibulala-magciwane ezisebenzayo ekulweni ne-COVID-19.
Sihlola ngokucophelela ikamelo ngalinye sisebenzisa izinhlu ezibanzi zezinto okumelwe zenziwe ekuhlanzeni ezisungulwe ochwepheshe.
Izinto zokuhlanza zikhona ukuze ukwazi ukuhlanza njengoba uhlala.
Zonke izindawo ezithintwa kakhulu zihlolwa kabili ukuthi zihlanzwe futhi zihlanzwe nge-sanitizer.
Ifulethi elihlanzekile nelihle eliyi-1BR endlini endala engokomlando ye-hawaii, ebiyelwe endaweni yokuhlala yase-Wailuku Town. Leli khaya libuyele enkathini yezitshalo futhi libuyekezwe ngenkathi ligcina ngokuthanda ubuntu balo bomlando. I-Central Maui, indawo yokupaka eyanele engaphandle komgwaqo.
Leli fulethi lezitshalo zomlando nelibuyekeziwe-inkathi ye-Wailuku Town lilungele ngokuphelele izivakashi ezifuna ukubalekela emizileni yezivakashi yaseNingizimu ne-West Maui. Ikhaya langasese, elithokomele, eliphephile neliphakathi nendawo lokuzijabulisa esiqhingini sethu esihle.
Ikamelo elikhulu linombhede omkhulu, usofa omkhulu wokulala, kanye ne-satellite exhonywe odongeni ukuze ibukwe embhedeni, noma usofa. Kukhona futhi ideski elincane elihle uma unomsebenzi othile okufanele uwenze, futhi i-air conditioning kufanele uyifise ngobusuku obupholile omahamba-nendlwana bethu buyeka ukushaya.
Ikhishi elincane linakho konke okudingayo ukuze wenze ukudla kwakho, kanye netafula elihle lekona lasemaphandleni elisethwe emafasiteleni ukuze ulijabulele. Amafasitela amaningi ayehlelwe kahle, ngaphambi kokuba kube khona i-air conditioning, ukuvumela amasiko amnandi asezindaweni ezizungezile ukuthi aphephe kahle yize kunjalo ayigcina ipholile futhi ithokomele.
I-Wayfinder iyindawo yokuqasha yangasese ngokuphelele enamathiselwe ekhaya elikhudlwana. Umndeni wesizukulwane sesihlanu sase-Maui ongumnikazi wekhaya uhlala engxenyeni engemuva yekhaya. Ziyancomeka kakhulu, zinobungane, futhi ziyazi into eyodwa noma ezimbili mayelana ne-Maui! Lokho kusho ukuthi bayahlonipha futhi abahloniphi imvelo, futhi bahlala behlonipha ubumfihlo bezivakashi zabo.
Itholakala endaweni yokuhlala ye-Wailuku Town yakudala, imizuzu eyishumi nje ukusuka esikhumulweni sezindiza. Le ndawo ifanele abantu abahlela ukuhlola indawo ezungeze i-Maui (okuthile engisikiselayo kungakhathaliseki ukuthi uhlala kuphi!) Kuqhelelene nezindawo ezinesimo sengqondo kanye nesipiliyoni emahhotela ezivakashi nama-resort.
I-Wailuku yidolobha elikhulu lase-Maui; alikho uhambo ngokuphelele futhi phansi emhlabeni. Uma kuqhathaniswa namadolobha asezwekazini, i-Wailuku iyidolobha elincane elilalayo, eliyisixwayiso sezikhathi ezilula kakhulu. Eminyakeni yamuva indawo yebhizinisi lase-Wailuku iye yabona ukuvuselelwa, inezitolo eziningi ezihlukahlukene zezitolo ze-hip nezindawo zokudlela ezivuleka eceleni kwezindinganiso ze-Maui zakudala.
Izibonelo zalokho ongase ukuthole uhambahambahamba e-Wailuku: izitolo zekhofi ezihamba phambili, izitolo zokugqoka zasendaweni, izitolo zezinwele, zonke izinhlobo ezahlukene zezindawo zokudlela ezingabizi kakhulu ezingekho ku-radar yezivakashi, izitolo zezinto zakudala, izitolo zesitayela sesiqhingi (ezinezinto ezinjengamabhodi okutshuza kanye nezinto zakudala zase-Hawaii kanye nobucwebe obungeke uwathole kuma-resort), isitolo sokuqopha esijabulisayo, izitudiyo ze-yogayo, i-Maui Academy of Performing Arts, isitolo sentuthu, imidlalo yaseshashalazini engokomlando ye-Iao, ibha ye-sushi, amagalari obuciko, isitolo se-crystal, i-pizza encane yangempela yase-New York – nokunye okuningi! Ibhonasi: uLwesihlanu wokuqala wenyanga ngayinye kukhona umcimbi wokuvimbela lapho abantu bevela khona yonke indawo yase-Maui ukuze bahlale, balalele umculo obukhoma, badle futhi babhrawuze izimpahla zabathengisi bendawo.
Uma ungaphandle kwedolobha, uhlezi emizuzwini embalwa ngaphambi kwalapho izintaba zase-West Maui ezihlaba umxhwele zihlukaniswe khona ukuze zivulekele i-Iao Valley engokomlando nengcwele.
I-Iao Valley yimizuzu embalwa nje ebukekayo ngemoto futhi inemizila yokuqwala izintaba (i-Kepaniwai Park phakathi lapha ne-Iao Valley iyindawo enhle yepikiniki.) I-North Shore yase-West Maui iqala eduze nalapha futhi, nama-vistas amahle kanye nokuqwala izintaba okuncane okufana ne-Waihe 'e Ridge Trail. Uma unesifiso sokufunda kabanzi ngomlando namasiko ase-Maui nase-Hawaii, i-Bailey House Museum iseduze futhi iphethe iqoqo elikhulu lezithombe nezinto zobuciko zase-Hawaii ezisukela emathuluzini amatshe endabuko kuya ku-Duke Kahanamoku 's surfboard. (I-Bailey House iyindawo enhle futhi yokuthola izipho eziyingqayizivele ezenziwe e-Maui.)
Imizuzu engu-15 ngakolunye uhlangothi ikuyisa e-Maui Ocean Center kanye nechweba lase-Malaea lokubhukuda ngezikebhe zokubhukuda kanye namawashi emikhomo. Ungamakhilomitha amahlanu futhi usuka e-Maui Tropical Plantation futhi unemizuzu engu-15-20 ukusuka ezindaweni zokuphumula zase-Kihei & Wailea. Uhhafu wehora uzokuyisa e-West Maui 's Lahaina Town. Ususondele futhi emgwaqweni oya e-Hana adventure, futhi nase-Haleakala kunezindawo ze-resort.
Ngokuqondene nokutshuza emoyeni ne-kite, nabathandi bemimoya, i-Kanaha, i-Kite Beach ne-Kahului Harbor kuqhele ngemizuzu nje engu-.
Inani elimangalisayo le-dollar lakho lokuhamba lapho ucabangela ukuthi yiziphi izindleko zokuhlala ze-resort – kanye nenani eliyingqayizivele lokokuzithokozisa kanye nokuthembeka okuza eceleni kwakho kubaluleke kakhulu.
Izivakashi zihlale zamukelekile ukufinyelela uma kukhona okudingekayo, sitholakala ngocingo noma nge-imeyili futhi yonke imininingwane yokuxhumana izonikezwa!
UAlexa Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 340050160000, TA-204-088-7296-01